Ahoana no hiarovana ny tongotra amin'ny lalan-drantsika varicose?
ianao eto: Home Body Care Ahoana no hiarovana ny tongotra amin'ny lalan-drantsika varicose?
Varicose lalan-drantsika ankoatra, izay Simbain'io ny hatsaran-tarehy ny tongony, mandroso ny fotoana, Izany mitondra ny fandrahonana tanteraka ny fahasalamana tsy, fa koa ny fiainan'ny olona iray. Misy ny fomba hiarovan-tena avy aminy?
Inona no atao hoe aretina?
Noho ny tsy fahombiazan'ny sahiran-tsaina ny venous valves venous niala taminy - ny ra mivoaka ho any an-fihadiana, nefa sarotra mifamadika outflows. Noho izany, ny rà miandrona ny tongotry, nihena miteraka fihenjanan'ny resaoro sy ny lalan-drantsika lalan-dra.
Ao ny tsy fisian'ny ara-potoana fitsaboana ny aretina varicose mandroso, izay afaka mitarika ho thrombophlebitis - mamaivay ny anatiny rindrin'ny lalan-drantsika. namorona clots, afaka hanakana tany fihadiana na miafara ao amin'ny avokavoka, izay mety hitarika ho amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Izany no mety mampidi-doza vokatry ny varicose lalan-drantsika.
ho toy ny fitsipika, varicose lalan-drantsika mitranga noho ny fototarazo predisposition ny aretina ihany, na ny toetra manokana ny olombelona taolana, nampahatezitra venous ny tsy fahampian'ny sy amin'ny ho avy mihitsy ny aretina. izany dia manaraka, fa ny olona toy izany dia tsy afaka hanafoana tanteraka varicose lalan-drantsika, nefa afaka manao fara fahakeliny, ny fisehoana sy ny fahasaro-po. Ny sisa dia tsy manisy ratsy fisorohana ihany koa ny fepetra, manampy amin'ny fisorohana aretina lehibe izany.
Mba hanaovana izany, dia mila manao vitsivitsy fitsipika, Manatsara fikorianan'ny ra:
Tsy tokony hifidy tery loatra-miendrika pataloha jeans sy pataloha, mafy atin'akanjo, compressing fehikibo sy ny corsets. Akanjo toy izany manimba fikorianan'ny ra.
Tsy tokony hatao ny hitondra famatrarana akanjo: stockings, stockings Tights from varicose lalan-drantsika.
Tsy mampihena ny ara-dalàna sy ny fikorianan'ny ra tsy mahazo aina na kiraro mafy, сдавливающая ступни. Из-за этого лучше отказаться от обуви на высоком каблуке. Tsara homarihina, что и обувь без каблука – это не лучший выбор. Самая лучшая циркуляция крови обеспечивается при высоте каблука 3-4 см.